Kedu ihe obere ụmụ agbọghọ mere - Wendy Francis | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ọ dịghị onye na-ahọrọ ma ọ bụrụ na a mụrụ ha nwanyị ma ọ bụ nwa nwoke. Na otu adịghị mma karịa ndị ọzọ. Mana enwere ọtụtụ ihe dị mma banyere ịbụ nwa agbọghọ! Kedu ihe mere ụmụ agbọghọ ji pụọ iche?
A na enweta ya site na Koorong Bookshop ebe a.
Ruo ọtụtụ afọ, mmadụ ikwere ihe ọ pụtara ịbụ nwoke ma ọ bụ nwanyị abụwo nnukwu nsogbu nye ọtụtụ ndị na-eto eto ka ha na-anwa ime ihe banyere onwe ha. Ana m anabata akwụkwọ ndị a dịka ezigbo ụzọ iji nyere ụmụ anyị aka ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ na mmekọahụ ha na-enwe ma nweere onwe ha ịbụ onye ọ bụla a chọrọ ka ha bụrụ. - Dr Megan Best, Dibia na Bioethicist, Mahadum nke Notre Dame Wendy na-ekwupụta eziokwu ndị dị ike naanị. Nwa ọ bụla kwesiri ka agwa ya na ọ dị mma, na ndụ na-enye ọ joụ, na ọdịnihu nwere olile anya, na ha nwere ihe bara uru iji tụnye na ọdịnihu ahụ. Ozi ndị a dị mfe bụ ntọala ma ga-agọzi ma ndị toworo eto na-agụ ma nwata ọbụla nụrụ ozi ndị a dị mkpa nke ịhụnanya. - Dr Elisabeth Taylor, Director nke Research, Australian Christian Lobby Ndụ ụmụ anyị nwanyị jupụtara na ọdịbendị ndị ama ama, ntanetị ịntanetị, na atụmanya na ụkpụrụ ndị okenye. Ndị nne na nna ndị na-egwu mmiri megide ebili mmiri a, ma mepụta ọnọdụ kwụsiri ike, na-emesi obi ike, na-agbanwe agbanwe ma na-ewuli elu maka ụmụ ha nwanyị ga-ahụ akwụkwọ a dị oke mkpa. - Dr Caroline Norma, Onye Mmekọ Ọkachamara Ọkachamara, Schoollọ Akwụkwọ nke Global, Urban na Social Studies, Mahadum RMIT
- Onye nkwusa